ရငျထဲမှာတော့ – My Blog
” သှားပွီလား … ကိုမငျး ” ” ဟုတျ … မမိုး ” ” မသကျထားရော ” ” ရှိတယျ … မမိုး … တံခါး စိထားတာ … ဝငျသှားလိုကျ ” ကြုပျ ဆိုငျသှားကာနီး အိမျက အထှကျ မကျြစောငျးထိုးအိမျက မမိုးက အကြ င်္ီလေး ကိုငျရငျ လှမျးမေးနတောပါ။ကြုပျလညျး ကြုပျမိနျးမ သကျထား အိမျထဲရှိကွောငျး ပွောပွီး ဆိုငျကယျနဲ့ထှကျခဲ့လိုကျတာ။ကြုပျနာမညျက မငျးသူ ဒါပမေယျ့ ကြုပျမိနျးမ ချေါသလို ကိုမငျးပဲ ချေါကွတာမြားတယျ။ကြုပျအသကျက ၃၅နှဈထဲရောကျပွီ အလုပျက ဈေးက သံဆိုငျတခုမှာ လုပျတယျ။ကြုပျက လုပျသကျလညျးကွာ ပါးရညျနပျရညျရှိတော့ ပိုငျရှငျက လကျမလှတျခငျြတာပေါ့။သူ့တူမနဲ့ ပေးစားထားတာ ကွညျ့တော့။ကြုပျမိနျးမနာမညျက သကျထားလှငျပါ ကြုပျကတော့ သကျထားပဲ ချေါတယျ ဟိုးအရငျထဲကပဲ။ သကျထားနဲ့ ကြုပျကို ပေးစားတော့ ကြုပျအသကျက ၃ဝပဲရှိသေးတာ အိမျထောငျသကျက ၅နှဈကြျောပွီ ကလေးမရသေးဘူးဗြ။
သကျထားက လိုတာလား ကြုပျကလိုတာလား မသိပါဘူး ဆေးစဈဖို့ ပွောကွပမေယျ့ မစဈဖွဈကွပါဘူး ဒီတိုငျးပဲ နလောခဲ့တာ။သကျထားက အရပျပုပမေယျ့ ပုခုံးကယျြပွီး တငျတှရေငျတှကေ သူ့နရောနဲ့သူ အတျောကွညျ့ကောငျးတာဗြ။မကျြနှာသှယျပွီး အသားလတျတယျ။ကြုပျက ညိုတယျ။ ဒီလိုဗြ ကြုပျနဲ့သကျထား အိမျငှားနရေငျး နဲ့ ကြုပျဘကျက အမှရေလိုကျတော့ သကျထားက သူ့ဦးလေး ကြုပျဆိုငျရှငျကို အကြိုးကွောငျးပွောပွီး ခုနတေဲ့ မွဝေိုငျးလေး ဝယျခိုငျးတာပေါ့။ကြုပျပိုကျဆံက သိနျး၉ဝပဲရတာပါ မွကေ သိနျး၁၂ဝ သကျထားဦးလေးက သိနျး၃ဝစိုကျဝယျပေးတယျ။အိမျက ထရံကာ သှပျမိုးပေါ့ အောကျက အုတျခငျး အိမျက ကြုပျတို့ပိုကျဆံနဲ့ ဆောကျတာပါ။ကြုပျတို့ ဆိုတာက သကျထားပိုကျဆံရော ပါပါတယျ။သကျထားက စကျခြုပျတာဗြို့။အပျထညျမရှိရငျ အျောဒါ ယူခြုပျတာ။ ၂နှဈအတှငျး သူ့ဦးလေး ပိုကျဆံ သိနျး၃ဝလညျး ဆပျပွီးပါပွီ။နောကျတနှဈကြ အိမျကိုနောကျရှပွေီ့း အောကျက အုတျခငျးပဈတာ။နောကျဖေးမှာ ရလေောငျးအိမျသာနဲ့ အိမျသာဘေးကို ရကေနျအသေးလေး ကပျဆောကျထားတယျ။
အိမျနောကျဆုတျတော့ အိမျရှေ့ ပေ၂ဝလောကျ နရော အလှတျလေး ပျေါလာတာပေါ့။အမှနျက အိမျတဈလုံးဆောကျပွီး အိမျငှားထားမလို့ ကွံထားတာဗြ။အကောငျထညျ မဖျေါဖွဈတာ။အဲဒီ မွအေလှတျကွောငျ့ ကြုပျစိတျတှေ ရှုတျထှေးကုနျတာဗြ။ ဒီလိုပါဗြာ အိမျပွငျဆငျပွီးတော့ မကျြစောငျးထိုးတိုကျခနျးကို ပွောငျးလာတဲ့ မမိုးကွောငျ့ပေါ့။မမိုးနာမညျက ခငျမိုးမွငျ့ပါ ကြုပျမိနျးမနဲ့ အရငျခငျတာ မိနျးမက မမိုး ချေါတော့ ကြုပျလညျး မမိုးပဲ ချေါလိုကျတယျ။မမိုးက ကြုပျထကျ ၃နှဈကွီးတယျ ၃၈နှဈဗြ အသားညိုညိုနဲ့ ခါးသေးရငျခြီ ကိုယျလုံးပေါ့။ယောကငြ်္ားရှိတယျ ယောကငြ်္ားက ရောဂါသညျပုံစံဗြ ပိနျကပျကပျ ဖွူရျောရျောနဲ့ပါ။ရောကျကာစ တိုကျခနျးရှေ့ သူ့အဝတျတှေ လှမျးတော့ ပလပျစတဈကောကျတဲ့ ကလေးတှလေကျခကျြထငျတယျ အဝတျစားတှေ ပြောကျပြောကျကုနျတာ အဝတျစားတှကေ ဈေးကွီးတယျ အကောငျးတှတေဲ့ ကြုပျမိနျးမ ပွောလို့ သိတာ။မမိုးက တခွားရပျကှကျတှမှော နပွေ့နျတိုး ပေးစားတာတဲ့။ဟုတျမှာ ညနေ ကြုပျ ဆိုငျကပွနျရငျ ဆိုငျကယျနဲ့ ထှကျသှားတာ ည၈နာရီ ခှဲလောကျမှ အိမျပွနျလာတာဗြ။ ဒါနဲ့ပဲ မိနျးမက မမိုးကို အိမျရှမွေ့အေလှတျမှာ အဝတျလာလှမျးဖို့ ပွောလိုကျတာပေါ့။
မမိုးက ရငျလြားနဲ့ အဝတျလာလာလှမျးတော့ ကြုပျတံမကျြစညျး လှဲတဲ့အခြိနျနဲ့ဆုံရငျ ရစေိုပွီးကပျနတေဲ့ မမိုး ကိုယျလုံးအလှကို မွငျမိတာပဲ။ရစေိုနတေဲ့ ထမိနျအောကျ တငျးထုတျနတေဲ့ နို့အုံထိပျက နို့သီးခေါငျးလေးတှေ ခါးသေးကဉျြလေးအောကျက ကော့ထှကျနတေဲ့ ဖငျသားစိုငျကွီးတှေ ခဏတိုငျး တှနေ့မေိတယျ။ကွာတော့ ကြုပျလညျး လိုးခငျြလာတာပေါ့။ဒီလိုပွောလို့ ကြုပျမိနျးမက မပေးဘူး မထငျနဲ့။ညပိုငျး စားသောကျ တီဗှီကွညျ့ပွီး အိပျယာဝငျတာနဲ့ ပုဆိုးလှနျပွီး စုပျပေးတော့တာ။ ကြုပျက ခိုငျးစရာကို မလိုတာ သူထနျနရေငျလညျး ထမိနျခြှတျပွီး ပကျလကျမှေးနတေဲ့ ကြုပျပါးစပျကို စောကျပတျနဲ့ပှတျတော့တာပဲ။ပွီးတာနဲ့ အားရပါးရ လိုးကွတာဗြို့။တခါတခါ ဖုနျးဖှငျ့ အပွာကားကွညျ့ရငျး အဲဒီကားတှထေဲက အတိုငျး အပွိုငျလိုကျလိုးပဈတယျ။မိနျးမပစ်စညျးတှကေလညျး မမိုးထကျမလြော့ဘူးဗြ။အရပျကလေးပဲ နဲနဲပုတာ။ကြုပျထကျ ပုတာပွောတာပါ သူအရပျနဲ့ သူပစ်စညျးတှကေ ကွညျ့ကောငျးတုနျးပဲ။ဒီကွားထဲကကို ကြုပျက မမိုးကို လိုးခငျြမိတာ။
မမိုး အကွညျ့တှကေလညျး ကြုပျအပျေါ မရိုးဘူးဗြ။တခါတခါ သူ့ယောကငြ်္ား ဆေးခနျးပို့ရငျ သူ့ယောကငြ်္ားကို တက်ကစီပျေါ ကြုပျနဲ့မမိုးက တှဲတငျပေးရတယျ။အဲဒီခြိနျဆို မမိုးဖငျတှေ ကြုပျလီးနဲ့ပှတျမိတဲ့အခါလဲပှတျမိ သူယောကငြ်္ားထိနျးရငျး ကြုပျပေါငျကွားထဲ မမိုးပေါငျတနျကွီးတှေ ခဏခဏ ရောကျလာတတျတာပေါ့။ မကွာပါဘူး ကြုပျနဲ့မမိုးနဲ့ လိုးဖွဈကွတယျ။ကြုပျကလညျးလိုးခငျြ မမိုးကလညျး သူ့ယောကငြ်္ားက လူမမာဆိုတော့ ဆာနတောပေါ့။တရကျကြ မိုးကလညျးရှာ နခေ့ငျးဘကျ မမိုးက အိမျရှကေ့နေ ကြုပျမိနျးမ နာမညျအျောရငျး လကျဖကျသုပျစားဖို့လာပိုတာဗြ။မိနျးမက မနကျတညျးက သူ့ဦးလေးအိမျ သှားတာ ညပိုငျးမှ ပွနျရောကျတော့မှာ။တခါတခါ သူအလုပျအားရကျလေး သှားတာဆိုတော့ ကြုပျလညျး ဘာမှ မပွောပါဘူး။မမိုးဝငျလာတော့ ကြုပျက အိပျခနျးတံခါးဟထားပွီး အိပျခငျြယောငျဆောငျနလေိုကျတာပေါ့။မိုးအေးအေးနဲ့ ဖုနျးဖှငျ့ပွီး အပွာကားကွညျ့နတေော့ လီးကထောငျ နရေောပဲ။ ခဏနတေော့ တံခါးဖှငျ့သံနဲ့အတူ မမိုးက ကြုပျတို့ လငျမယားခနျးထဲ ဝငျလာတာပေါ့။
အိမျရှေ့ဧညျ့ခနျးနဲ့ အခနျးလှတျ တခနျးကြျောက ကြုပျတို့အိပျခနျးပါ။ခါတိုငျး မမိုးက ကြုပျမိနျးမနဲ့ အခနျးထဲထိ စကားဝငျပွောနကွေဆိုတော့ ခပျရဲရဲပဲ ဝငျလာတာဗြ။ကုတငျနားရောကျတော့ မမိုးခွသေံက ရပျသှားတာပဲ။ကြုပျလညျး မကျြလုံးလေး အသာဖှငျ့ကွညျ့တော့ ထငျတဲ့အတိုငျး ကြုပျပုဆိုးထဲက ထောငျထှကျနတေဲ့ လီးကို စိုကျကွညျ့နတော။ကြုပျမကျြနာကွညျ့လိုကျ ကြုပျလီးကွညျ့လိုကျပေါ့။ကြုပျလညျး မမိုး ကြုပျမကျြနာကွညျ့တာနဲ့ မကျြလုံးမိတျပဈတာ ပွီးမှ အခွနေပွေနျဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတာပဲ။ ခဏနတေော့ မမိုးက ကုတငျဘေး တငျပလှဲဝငျထိုငျရငျး ပုဆိုးအပွငျကနပေဲ ကြုပျလီးကို ဆုပျကိုငျနတေယျ။ကြုပျမကျြနှာကိုကွညျ့ရငျး ပုဆိုးခါးပုံစကို ဖွညျခပြဈပွီး ပုဆိုးကို ပေါငျလယျထိဆှဲခြ လီးကို ပွနျကိုငျကွညျ့နတောဗြ။လီးအရညျပွားကိုဖွဲလိုကျ စုလိုကျနဲ့ ကြုပျလညျး မနနေိုငျတော့ပါဘူး။
ခကျြခငျြးကုနျးထပွီး ကြုပျလီးကိုငျနတေဲ့ မမိုးကို ကုတငျပျေါဆှဲလှဲပဈတာ။ကွောငျကွညျ့နတေဲ့ သူ့ထမိနျကို လှနျပွီး ကုတငျပျေါ ပကျလကျအနထေား အိပျခိုငျးရငျးအပျေါက ခှလိုးလိုကျတယျဗြာ။အစတော့ မူတာပေါ့ နောကျပိုငျးလီးဝငျတာနဲ့ ငွိမျကသြှားတယျ။တဖွညျးဖွညျး ပွနျပွီး အောကျကနပေငျ့ပေးနတောပါပဲ။ တခြီပွီးတော့ နှဈယောကျသား ပကျလကျမှေးရငျး စကားပွောဖွဈကွတယျ။ဒီကိစ်စ ကြုပျမိနျးမ သကျထား မသိပါစနေဲ့ပေါ့။ကြုပျက နောကျကြ အခှငျ့ရေးပေးရငျး ခံမှာလားမေးတော့ ခေါငျးညိတျပွရှာတယျ။အတျောလေးကွာတော့ ကြုပျက သူ့ထမိနျခြှတျပဈတာ မကျြနှာလေးရဲတှကျနတောဗြို့။ထမိနျကြှတျသှားတာနဲ့ သူ့စောကျဖုတျလေး လကျနဲ့အုပျပွီး ပကျလကျအနထေားနဲ့ မကျြနှာလှဲနတောဗြ။ကြုပျလညျး ပုဆိုးခြှတျပွီး မမိုးပေါငျသားလေးတှေ လကျနဲ့ပှတျသပျပေးလိုကျတယျ။စောကျဖုတျကို လကျနဲ့အုပျထားပမေယျ့ ပေါငျတှတေော့ မသိမသာ ဖွဲပေးနတောပါ။ဒါနဲ့ကြုပျလညျး အဖုတျကိုအုပျထားတဲ့ လကျတှဖေယျရငျး သူ့ပေါငျကွားထဲဝငျပွီး ကုနျးယကျပဈတော့တာ။
မကျြလုံးလေးမိတျပွီး တအီးအီးနဲ့ ညညျးနတောဗြို့။ပေါငျတနျလေးတှလေညျး တဇပျဇပျတုနျနတော။ကြုပျရပျလိုကျရငျတော့ ခါးလေးကော့ပွီး သူ့စောကျပတျနဲ့ ကြုပျပါးစပျကို တပေ့ေးပွနျရောပဲ။ကြုပျလညျး အဖုတျအကျကှဲကွောငျးထဲ အထကျအောကျယကျပေးပွီး အစိလေးကို မနာတနာလေး ကိုကျပေးလိုကျတယျ။အဲလို အစိလေးကိုကျပေးလိုကျရငျ ပေါငျတနျတှမွှေောကျပွီး ဖွဲရငျး ကြုပျမကျြနှာကို သူ့စောကျဖုတျနဲ့ ဆှဲကပျပဈတာ။ ကွာကွာတော့ မခံနိုငျရှာပါဘူး လိုးပေးဖို့ ခပျတိုးတိုးလေး လှမျးပွောနတေယျ။ ” အ …… ရှီးးးးးးးးးးးး …… လိုးရငျလိုးတော့ … ကိုမငျး ရယျ ” မမိုးစကားဆုံးတာနဲ့ ကြုပျလညျး ပထမတခါလိုပဲ အပျေါက ဖိလိုးပဈတာ။အခကျြရေ ၅ဝလောကျကြ မူတျပေးထားတဲ့ အရှိနျနဲ့မို့ မမိုး ဒုတိယအကွိမျ ထပျပွီးသှားတာပါ။ကြုပျမပွီးသေးမှနျး သိလို့ ကြုပျခါးကို သူ့ခွနှေဈဖကျနဲ့ ခြိတျဆှဲပွီး ထပျလိုးဖို့ ပွောနသေေးတယျ။
” မမိုး … လေးဖကျ ကုနျးပေး ပါ့လား ” ကြုပျစကားဆုံးတော့ ခကျြခငျြးပဲ ကုနျပေးပါတာဗြ။ကြုပျလညျး နောကျကနေ မမိုးဖငျကွီး ငုံ့ကွညျ့ရငျး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးတော့တာပေါ့။အတျောလေးကွာမှ ကြုပျလဲပွီးတယျ။၂ခြီပွီးတော့ မမိုးက ထမိနျပွနျဝတျပွီး ပွနျမှေးနတော။ပွနျမယျလို့ မပွောသေးတော့ ထပျလိုးရဦးမယျ ဆိုတာ ကြုပျအလိုလို သိနတောပေါ့။ခနားနားပွီး မမိုးယူလာတဲ့ လကျဖကျသုပျနဲ့ ထမငျးစားလိုကျတယျ။မမိုးကတော့ ထမငျးမစားဘူး ဘေးကနေ လကျဖကျသုပျပဲ ထိုငျစားနတော။ထမငျးစားပွီး မမိုးက ကျောဖီဖြျောပေးတော့ ကျောဖီထုပျနဲ့ နို့ဆီက အိမျမှာ အဆငျသငျ့ပါ ရနှေေးတညျရုံပါပဲ။ကြုပျလညျး ကျောဖီလေးသောကျလိုကျ ဆေးပေါ့လိပျလေး ရှိုကျလိုကျနဲ့ ခဏနတေော့ အိပျခနျးထဲ ပွနျဝငျလာကွတယျ။ မမိုး ပွနျတော့မလား မေးတော့ ခေါငျးရမျးပွနတော။သူ့ယောကငြ်္ားကို ထမငျးကြှေးပွီးသားတဲ့ သူလညျးစားပွီးသားပွောတယျ။ကြုပျလညျး ကုတငျပျေါပကျလကျလှဲရငျး ဆေးလိပျဖှာနတောပေါ့။မမိုးက ကြုပျခွရေငျးကနေ ပေါငျကွားထဲကွညျ့နတောပဲ။
ခဏနတေော့ ပုဆိုးထဲခေါငျးတိုးပွီး ကြုပျလီးကို တပွှတျပွှတျစုပျတော့တာ။ပုဆိုးလှနျကွညျ့တော့ ကြုပျပေါငျတှကေို ဆှဲဆိတျတော့တာဗြ။သူရှကျလို့ မကွညျ့နဲ့တဲ့။လီးထိပျကို ကလေးနို့စို့သလို စုပျပေးနတောပါ။ပါးစပျညှောငျးရငျ လကျက ဂှငျးထုပေးသေးတယျ။ ကြုပျလီးတဈခြောငျးလုံး မာထငျလာမှ အပျေါကနေ ခှလိုးနတော။ထမိနျခြှတျခိုငျးတော့ ရှကျနသေေးတယျဗြ။ခုနတောငျ ခြှတျပွီးသားပွောတော့ အဲခြိနျ သူ စိတျအရမျးထနလေို့တဲ့။ထမိနျခြှတျပေးပါတယျ ဒါပမေယျ့ ကြုပျပျေါမှောကျခပြွီး သူ့စိတျကွိုကျ ဆောငျ့လိုးလိုကျ ဝိုကျလိုးလိုကျနဲ့ ပွီးကာနီးကြ ကြုပျနူတျခမျးကို ခပျတငျးတငျး ဆှဲစုပျပွီး စောကျရညျတှပေနျးထုတျပဈတာ။ကြုပျလညျး အောကျကနေ ကွိတျလိုးလေး လိုးရငျးပွီးလိုကျရတာပေါ့။နောကျရကျကစပွီး မမိုးက ကြုပျရှိတဲ့ခြိနျ အိမျဘကျလာပါတယျ ၂ခါလောကျပဲ လိုးလိုကျရတယျ။
ကနျြရကျတှကေ ကြုပျမိနျးမ သကျထားရှိတော့ ဘာမှလုပျမရဘူးဗြို့။ ၁လလောကျနတေော့ ညပိုငျး သကျထားက နကျဖနျ အလုပျပါးတုနျး သူ့ဦးလေးအိမျ သှားမယျပွောတာ ကြုပျလညျး ဝမျးသာမိတာပေါ့။မနကျဖနျ မမိုးကို ချေါလိုးရုံပဲ။နောကျရကျ မနကျကြ ကြုပျလညျး အလုပျကို စောစောထှကျရငျး မိနျးမကို သူ့ဦးလေးအိမျဝငျပို့ပွီးမှ ဆိုငျဖကျထှကျခဲ့လိုကျတာ။မိနျးမဦးလေးအိမျက သကျသကျဗြ ဆိုငျနဲ့ ဝေးတယျ။ဆိုငျရောကျတော့ မမိုးကို လိုးရမယျဆိုတဲ့အသိနဲ့ လီးက တခြိနျလုံးထောငျနတေော့တာဗြို့။၁၁ခှဲလောကျထိ နယျပို့ရမယျ့ ပစ်စညျးတှေ သခြောစဈ ထုတျပိုးပွီး စာရငျးစာအုပျထဲ အကုနျမှတျပေးလိုကျတယျ။ထမငျးခြိုငျ့ဖှငျ့ပွီး ဆိုငျမှာပဲ ထမငျးစားလိုကျတာပေါ့။ ပွီးတာနဲ့ အိမျပွနျလာခဲ့လိုကျတာ ၂နာရီမှ ဆိုငျပွနျလာမယျ့အကွောငျး ကလေးတှေ မှာထားခဲ့ပွီ။ခါတိုငျးထမငျးစားပွီးရငျ လကျဖကျရညျဆိုငျသှားထိုငျပွီး ၁ခကျြခှဲလောကျမှ ဆိုငျပွနျလာတာပါ။
ဒီနတေ့ော့ ဆိုငျကယျနဲ့ အိမျပွနျလာရငျး တလမျးလုံးတှေးလာတာဗြ။ဒီတခါ မမိုးကို တုံးလုံးခြှတျခိုငျးပွီး လိုးတော့မှာ မမိုးကလညျး နောကျဆုံးခေါကျလိုးတုနျးက တုံးလုံးခြှတျခံဖို့ ကတိပေးပွီးပွီ။ရပျကှကျနားမရောကျခငျ ဆိုငျကယျ ဘီးပေါကျတာနဲ့ လထေိုးကြှတျဖာဆိုငျ ဆိုငျကယျအပျထားရငျး အရပျထဲ ခွခေငျြလြှောကျလာခဲ့လိုကျတယျ။အိမျရောကျတော့ အိမျးဝငျး တံခါးက စိထားတာဗြ။ မနကျက သော့ခတျထားခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ အိမျဝငျး တံခါးအသာဖှငျ့ပွီး ဝငျတော့ အိမျတံခါးကလညျး စိရုံလေး စိထားတာ။တခုခုတော့ မှားနပွေီဗြ။သူခိုးဝငျပွီထငျတယျ မမိုးကို ချေါလိုးမယျဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ တောငျနတေဲ့လီးက ပြော့ကသြှားတယျဗြာ။အိမျရှပွေ့နျထှကျ တုတျတဈခြောငျးယူရငျး အိမျထဲခွဖှေဖှနငျးပွီး ပွနျဝငျလာတာပေါ့။
ဧညျ့ခနျးထဲလညျး လူမရှိဘူး။နောကျဖေးလြှောကျလာတော့မှ စကားသံ တိုးတိုးလေး ကွားမိတာဗြ။အသံကွားတဲဆီ တိုးကပျသှားတော့ ကြုပျတို့လငျမယားခနျးထဲကပါ။ ” ချချ ချချ … ဒါပဲ … သူဟာကွီးက … အတုတျကွီး ” ကြုပျမကျြလုံးပွူးသှားမိတယျဗြာ ဒါက ကြုပျမိနျးမ သကျထား အသံဗြ။မနကျက ကြုပျကိုယျတိုငျ သူ့ဦးလေးအိမျ လိုကျပို့ထားတာ။ ” အဲဒါမို့ … သကျထားလေးကို … ဦးထှနျးက ဖုနျးဆကျချေါရတာပေါ့ ” သကျထားစကားအဆုံး ခကျြခငျြးထှကျပျေါလာတဲ့ ယောကငြ်္ားသံကွောငျ့ ကြုပျလညျး ဒုတိယအကွိမျ အံအောရငျး သိခငျြစိတျ တားမရတော့ပါဘူး။ဟနတေဲ့ အိပျခနျးတံခါးပေါကျကနေ အတှငျးဘကျ ခြောငျးကွညျ့လိုကျတယျ။ကြုပျမိနျးမသကျထားက ကုတငျပျေါမှာ တုံးလုံးလေးဗြ ဘေးတဈစောငျးလှဲလကျြလေး ဦးထှနျးက အပျေါကစှပျကယျြအဖွူနဲ့ အောကျကပုဆိုးမပါတော့ဘူး ပုဆိုးက ကုတငျအောကျကွမျးပငျမှာ ပုံလကျြလေးပဲ။ဦးထှနျးဆိုတာ အရပျထဲက ဆိုငျကယျတက်ကစီသမားပါ အသကျက ၅ဝကြျောပွီး လကျပွငျကိုငျးကိုငျး အရပျရှညျရှညျနဲ့ ခေါငျးဖွူကွီးပေါ့။
ထူးခွားတာက ဦးထှနျးပေါငျကွားက လီးဗြ အတုတျကွီးပဲ။အရှညျက ကြုပျလောကျမရှိပမေယျ့ အတုတျက သိသာတယျဗြာ။မပြော့မမာ အနထေားတောငျ ကြုပျတောငျတဲ့ အနထေားလောကျရှိနတောဗြို့။သကျထားခေါငျးရငျးနား ဘယျခွထေောကျကှေးထိုငျပွီး ညခွကေ ကုတငျအောကျ တှဲလောငျး ခထြားတာပါ။သကျထားက ဦးထှနျးဘယျဘကျပေါငျပျေါ ခေါငျးအုံးပွီး လကျတဖကျက ဦးထှနျးလီးကွီး ကိုငျစှရငျး စကားပွောနတောဗြ။ခုခြိနျ တုတျနဲ့ဝငျရိုကျရ ကောငျးမလား စဉျးစားမိခြိနျ သူတို့စကားတှကွေောငျ့ ကြုပျ ရိုကျခငျြတဲ့စိတျတှေ ပြောကျသှားခဲ့တာပါ။ ” ကိုမငျးက … အလုပျဆိုငျမှာလား ” ” အငျးလေ … ညနမှေ ပွနျလာမှာ ” ” အျော … သိသှားရငျ သကျထားတို့ စကားမြားမဆိုးလို့ပါ ” ” အငျးပါ … သူတောငျ သစ်စာမရှိတာ … သကျထားက ဘာလို့သစ်စာထားနရေဦးမလဲ ” ” အငျး … ခငျမိုးလှငျကလညျး မထငျရဘူးနျော … သကျထားနဲ့ ဒီလောကျခငျတာကို ” ” ဒါကတော့ … မမိုး စောကျပတျက … သကျထားစောကျပတျထကျ … ကောငျးလို့နမေယျ ” ” မယုံပါဘူးကှယျ … သကျထားလေး စောကျပတျက ဒီလောကျ အိစကျနတောကို ” ” အဲလိုတှေ … ညာညာ လိုးနတော … မသိခကျမယျ … ဟှနျ့ ” သှားပွီဗြို့ ကြုပျမမိုးကို လိုးတာ မိနျးမက သိသှားတာဗြ။
ဘယျလိုသိတာလဲ မသိဘူး ဦးထှနျးကရော ဘယျကသိတာလဲ မမိုးနဲ့ မကငျးတာလား။ကြုပျလညျး စဉျးစားရငျး အိပျခနျးထဲ ဆကျကွညျ့နတေယျ။ ” ညာတော့ မလိုးပါဘူးနျော … ဦးထှနျးက … ဆိုငျကယျတက်ကစီ ဖေါကျသညျမို့ သိအောငျလာပွတာပါ … သကျထားက ခံပွငျးစိတျ ဝငျပွီး အလိုးခံတာလေ ခိခိ ” ” အံမယျ … သကျထားစိတျဆိုးပွီး ငိုနတေုနျး … ဒီလီးကွီးက … မသိမသာနဲ့ လိုးသှားတာ ဟှနျ့ ” ဟမျ !! ဦးထှနျးက ဘာလာပွတာပါလိမျ့ ကြုပျတှေးမရဘူးဗြာ။ ” အငျး တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျပါ … သကျထားရယျ … အဲဒီနကေ … မွောကျရပျကှကျက သကျထားချေါထားတာကို … ဟောဒီ သကျထားလေးမှတျပွီး လာခဲ့တာပါ … ဒီရောကျတော့ လူမရှိလို့ လှညျ့ပွနျမလို့ လုပျတုနျး အခနျးထဲက ညညျးသံကွားတာနဲ့ ခြောငျးကွညျ့မိတာ … မထငျမှတျပဲ ကိုမငျးက … ခငျမိုးလှငျ လေးဖကျထောကျပွီး လိုးနတောလေ … ဒါနဲ့ ဦးထှနျးလညျး ဖုနျးနဲ့ ဗှီဒီယိုရိုကျယူထားပွီး သကျထားကိုပွမိတာပေါ့ ”
” အဲတုနျးက သကျထား တကယျဝမျးနညျးတာပါ ဒေါသလညျး ဖွဈတယျ ဒါကွောငျ့မို့ ဦးထှနျးကို အလိုးခံပဈလိုကျတာ … အဲဒီကမြှ နလေို့ထိုငျလို့ရသှားတာ … ပွီးတော့ ” ” ပွီးတော့ … ဘာဖွဈလညျး ” ” ပွီးတော့ … ဟောဒီက လီးတုတျကွီး ကိုလညျး … စှဲသှားတာပေါ့ရှငျ … ဒါ ကွားခငျြနတောမလား … ဟှနျ့ ဟှနျ့ ” အျော…ကြုပျနဲ့မမိုးလိုးတဲ့ပုံကို ဗှီဒီယိုရိုကျပွီး ဦးထှနျးက မိနျးမကို ပွလိုကျတာဗြ။မိနျးမကလညျး ကြုပျကို ရှဲ့ပွီး ဦးထှနျးကို အလိုးခံတာနမေယျ။ကြုပျထကျ ပိုတုတျတဲ့ဦးထှနျး လီးကို စှဲသှားတာနမှောပါ။ခုလညျး ဟှနျ့ဟှနျ့ ဆိုပွီး ဦးထှနျးလီးကို စုလိုကျဖွဲလိုကျနဲ့ စိုကျကွညျ့နတောပဲ။တဖွညျးဖွညျး ဦးထှနျးလီးကွီး ကြုပျမိနျးမ လကျထဲ မာလာပွီဗြ။ထငျတဲ့အတိုငျးပါပဲ ကြုပျလီးထကျ အမြားကွီးတုတျတယျ ထိပျက ဒဈကွီးက ခရမျးခဉျြသီးအမှဲ့လိုပဲ ရဲပွီး ကော့ထှကျနတော။
သကျထားက ဖွဲထားတဲ့လီးကို ပွနျမစုတော့ပဲ ဒဈဖူးနောကျနားလေးကို လြှာနဲ့ယကျပွီး ဆှဲစုပျနတော။ပွီးမှ လြှာထိပျလေးကို ထုတျပွနတေယျ။ ” ဆောရီးသကျထားရယျ … ရမေဆေးခဲ့ရတာ ” ” ဟငျ့အငျ … ရတယျ ဦးထှနျးရဲ့ … သကျထားကွိုကျတယျ ” ကြုပျမိနျးမ သကျထားက လြှာကို ပွနျလိပျသှငျးပွီး တစုံတခု မြိုခပြွီးမှ ပွနျပွောနတောပါ။ ” သကျထားလေး ကွိုကျရငျ … နောကျခါလဲ … ရမေဆေးပဲ ထားလိုကျမယျ … ဒါမှ လခြီးဖတျတှေ မြားလာမှာ ” ” အငျး … မဆေးနဲ့ … ၃ရကျတခါလောကျ … သကျထားလြှာနဲ့ လာဆေးလှညျ့ပေါ့ ” ဦးထှနျးဒဈနောကျ လီးအရညျပွားပျေါက လခြီးဖတျတှကေို ကြုပျမိနျးမက တအားကွိုကျတာဗြ။တပွှတျပွှတျနဲ့ ပွောငျနအေောငျ ယကျစုပျပွီး မြိုခနြတေယျ။ကြုပျကတော့ လီးကို သနျ့ရှငျးအောငျအမွဲဆေးထားပေးတာ။မိနျးမက မထငျမှတျပဲ လခြီးကွိုကျတာ ခုမှ သိလိုကျရတာဗြာ။ခဏနတေော့ ဦးထှနျးက ပကျလကျလှနျပေးလိုကျတာ သကျထားက ဦးထှနျးမကျြနှာခှပွီး စောကျပတျနဲ့ တကျပှတျတော့တာပဲ။
” အ အားးး …… ဟုတျတယျ …… ယကျယကျ … အစိလေးလဲ …… စုပျပေး … အမလေးးး ကောငျးလိုကျတာ ဦးထှနျးရယျ ” ကြုပျအခွနေကေလညျး မိနျးမက သူစိမျးအဖိုးကွီးကို တကျပှတျနတောတောငျ ပွောမရတဲ့ အခွနေဗြေို့။ကြုပျနဲ့မမိုး လိုးတာ မိနျးမက သိသှားတော့ ပွောလဲ တဈယောကျတခှနျး စကားမြားရုံပဲလေ။ကွညျ့နတေုနျးလေး သကျထားက ဦးထှနျး မကျြနာပျေါခှထားရာကနေ ကုတငျပျေါ ပကျလကျလှနျပေးနပွေီ ကြုပျမိနျးမ ပေါငျတနျနဲ့ ဖငျကွီးတှကေ လိုးခငျြစရာပါပဲ။ဦးထှနျးလို အဖအေရှယျတောငျ မလှတျတမျး ဆှဲဆောငျနိုငျတယျ။ ” ဦးထှနျး … ဖွညျးဖွညျးပဲ … လိုးနျော … အရှိနျရမှ … စိတျကွိုကျလိုး ” ” အငျးပါ … သကျထားလေးရယျ … သကျထားလေးရပွီဆိုမှ … အားရပါးရ လိုးမှာပါ ” ကြုပျမိနျးမသကျထားက အလိုးသာခံခငျြတာ ဦးထှနျးလီးကို ကွောကျနတေုနျးပဲ။လီးထိပျဝငျတာနဲ့ မကျြနာလေး ရှုံ့မဲ့နတောဗြို့။ ” အမလေးးး … ကြှတျကြှတျ ” ” နာလို့လား ” ” အငျး ” ဦးထှနျးက လီးပွနျထုတျပွီး ကြုပျမိနျးမ စောကျပတျလေးကို ယကျပေးပွနျတယျ။ခဏနတေော့မှ ပွနျလိုးနတော။
လီးတဝကျလောကျ အထုတျသှငျးလုပျရငျး မိနျးမနို့တှေ ကုနျးစို့ပေးနတောဗြို့။မိနျးမလညျး နို့စို့ခံရငျး လီးအရသာခံနတောပေ့ါ။ငွိမျသှားတာနဲ့ ဦးထှနျးက လီးအရငျးထိ ဖိသှငျးတာနမေယျ မိနျးမ အျောသံလေး ခပျစူးစူး ပွနျထှကျလာပွနျရော။ဒီတခါ ဦးထှနျးက မညှာဘူးဗြ ကြုပျမိနျးမ ပါးစပျကို လကျနဲ့အုပျပွီး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးပဈတာ။ပါးစပျပိတျခံရတော့ မိနျးမအသံကလညျး ဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ့ပေါ့ ပကျလကျအနထေားလေးနဲ့ တှနျ့လိမျနတော အောကျကနေ ဦးထှနျးလီးဆီက လှတျအောငျ ရုနျးနသေလိုပဲ။ ဦးထှနျးဆောငျ့လိုးတိုငျး ကြုပျတောငျတုနျတုနျနရေတာပါ။ထူးခွားတာက ကြုပျပေါငျကွားက လီးဗြ ပထမဒေါသဖွဈရာကနေ ဒေါသနရော ကာမစိတျက အစားထိုးနရောယူပွီး ကိုယျ့မိနျးမ သူစိမျးလိုးနတောတောငျ သာယာသလို ကနြေပျသလို ခံစားနမေိတာပဲ။လကျနဲ့ ၅ခကျြလောကျပဲ ထုလိုကျရတယျ လရညျတှေ တဖြောဖြောနဲ့ဗြာ ခါတိုငျး မိနျးမကို လိုးရတာထကျကို အရသာရှိနတောဗြို့။လရညျတှကေုနျမှ ကြုပျလညျး ဂှငျးတိုကျရာကနေ လီးကိုလှတျပွီး မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတာ။
မိနျးမက မအျောတော့ပါဘူး မအျောတဲ့အပွငျ အောကျကနေ ဖငျလေးပငျ့ပေးပွီး ဦးထှနျးကို စိတျကွိုကျလိုးဖို့ ပွောနပေါပွီ။ ” အားးးး ရှီးးးးးးးး …… ရပွီ ဦးထှနျး … လိုးတော့ မညှာနဲ့ … သကျထား ခံနိုငျပါပွီ ” မိနျးမ စကားဆုံးတာနဲ့ ဦးထှနျးကလညျး မီးပှငျ့မတတျဆောငျ့လိုးတာဗြာ အသကျရှယျနဲ့ မလိုကျဘူး ကုတငျတိုငျတှေ ရမျးခါနတောဗြ။ကြုပျမိနျးမ သကျထားကတော့ အောကျကနေ လီးအရသာ ခံရငျး ဦးထှနျး လကျမောငျးတှပှေတျပွီး တဟငျးဟငျး ညညျးနတောဗြို့။ဦးထှနျးက အသကျကွီးသလောကျ လိုးအားလညျး သနျတယျဗြ မိနျးမ ၂ခြီပွီးမှ သူပွီးတာ။ဦးထှနျးလီး ဆှဲထုတျတာနဲ့ မိနျးမက ကုနျးထပွီး လရညျတှနေဲ့သူ့စောကျရညျတှေ ပပှေနတေဲ့ လီးကို ကုနျးစုပျပေးလိုကျသေးတယျ။ ဦးထှနျးလီးကွီး မူလအရှယျစားပွနျရောကျတဲ့အထိ ပွောငျစငျအောငျ စုပျပွီးမှ ပါးစပျထဲက လီးကို ထုတျပေးလိုကျတာပါ။ဦးထှနျး ပုဆိုးပွနျဝတျတာနဲ့ ကြုပျလညျး အသာလေး အိမျပွငျပွနျထှကျခဲ့တယျ။ဆိုငျကယျဘီးပေါကျလို့ အပျထားတဲ့ဆီ လမျးလြှောကျလာရငျး ဆိုငျကယျပွနျရှေးပွီး အလုပျဆိုငျပွနျသှားရတာပေါ့။ညနပေိုငျး ကြုပျအိမျရောကျတော့ ကြုပျမိနျးမသကျထားက ရခြေိုးပွီး သနပျခါး အဖှေးသားနဲ့ဗြ။နခေ့ငျးက ဦးထှနျးကို အလိုးခံတာ သူမဟုတျသလိုပါပဲဗြာ…..ပွီး။
” သွားပြီလား … ကိုမင်း ” ” ဟုတ် … မမိုး ” ” မသက်ထားရော ” ” ရှိတယ် … မမိုး … တံခါး စိထားတာ … ဝင်သွားလိုက် ” ကျုပ် ဆိုင်သွားကာနီး အိမ်က အထွက် မျက်စောင်းထိုးအိမ်က မမိုးက အကျ င်္ီလေး ကိုင်ရင် လှမ်းမေးနေတာပါ။ကျုပ်လည်း ကျုပ်မိန်းမ သက်ထား အိမ်ထဲရှိကြောင်း ပြောပြီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်ခဲ့လိုက်တာ။ကျုပ်နာမည်က မင်းသူ ဒါပေမယ့် ကျုပ်မိန်းမ ခေါ်သလို ကိုမင်းပဲ ခေါ်ကြတာများတယ်။ကျုပ်အသက်က ၃၅နှစ်ထဲရောက်ပြီ အလုပ်က ဈေးက သံဆိုင်တခုမှာ လုပ်တယ်။ကျုပ်က လုပ်သက်လည်းကြာ ပါးရည်နပ်ရည်ရှိတော့ ပိုင်ရှင်က လက်မလွတ်ချင်တာပေါ့။သူ့တူမနဲ့ ပေးစားထားတာ ကြည့်တော့။ကျုပ်မိန်းမနာမည်က သက်ထားလွင်ပါ ကျုပ်ကတော့ သက်ထားပဲ ခေါ်တယ် ဟိုးအရင်ထဲကပဲ။ သက်ထားနဲ့ ကျုပ်ကို ပေးစားတော့ ကျုပ်အသက်က ၃ဝပဲရှိသေးတာ အိမ်ထောင်သက်က ၅နှစ်ကျော်ပြီ ကလေးမရသေးဘူးဗျ။
သက်ထားက လိုတာလား ကျုပ်ကလိုတာလား မသိပါဘူး ဆေးစစ်ဖို့ ပြောကြပေမယ့် မစစ်ဖြစ်ကြပါဘူး ဒီတိုင်းပဲ နေလာခဲ့တာ။သက်ထားက အရပ်ပုပေမယ့် ပုခုံးကျယ်ပြီး တင်တွေရင်တွေက သူ့နေရာနဲ့သူ အတော်ကြည့်ကောင်းတာဗျ။မျက်နှာသွယ်ပြီး အသားလတ်တယ်။ကျုပ်က ညိုတယ်။ ဒီလိုဗျ ကျုပ်နဲ့သက်ထား အိမ်ငှားနေရင်း နဲ့ ကျုပ်ဘက်က အမွှေရလိုက်တော့ သက်ထားက သူ့ဦးလေး ကျုပ်ဆိုင်ရှင်ကို အကျိုးကြောင်းပြောပြီး ခုနေတဲ့ မြေဝိုင်းလေး ဝယ်ခိုင်းတာပေါ့။ကျုပ်ပိုက်ဆံက သိန်း၉ဝပဲရတာပါ မြေက သိန်း၁၂ဝ သက်ထားဦးလေးက သိန်း၃ဝစိုက်ဝယ်ပေးတယ်။အိမ်က ထရံကာ သွပ်မိုးပေါ့ အောက်က အုတ်ခင်း အိမ်က ကျုပ်တို့ပိုက်ဆံနဲ့ ဆောက်တာပါ။ကျုပ်တို့ ဆိုတာက သက်ထားပိုက်ဆံရော ပါပါတယ်။သက်ထားက စက်ချုပ်တာဗျို့။အပ်ထည်မရှိရင် အော်ဒါ ယူချုပ်တာ။ ၂နှစ်အတွင်း သူ့ဦးလေး ပိုက်ဆံ သိန်း၃ဝလည်း ဆပ်ပြီးပါပြီ။နောက်တနှစ်ကျ အိမ်ကိုနောက်ရွေ့ပြီး အောက်က အုတ်ခင်းပစ်တာ။နောက်ဖေးမှာ ရေလောင်းအိမ်သာနဲ့ အိမ်သာဘေးကို ရေကန်အသေးလေး ကပ်ဆောက်ထားတယ်။
အိမ်နောက်ဆုတ်တော့ အိမ်ရှေ့ ပေ၂ဝလောက် နေရာ အလွတ်လေး ပေါ်လာတာပေါ့။အမှန်က အိမ်တစ်လုံးဆောက်ပြီး အိမ်ငှားထားမလို့ ကြံထားတာဗျ။အကောင်ထည် မဖေါ်ဖြစ်တာ။အဲဒီ မြေအလွတ်ကြောင့် ကျုပ်စိတ်တွေ ရှုတ်ထွေးကုန်တာဗျ။ ဒီလိုပါဗျာ အိမ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ မျက်စောင်းထိုးတိုက်ခန်းကို ပြောင်းလာတဲ့ မမိုးကြောင့်ပေါ့။မမိုးနာမည်က ခင်မိုးမြင့်ပါ ကျုပ်မိန်းမနဲ့ အရင်ခင်တာ မိန်းမက မမိုး ခေါ်တော့ ကျုပ်လည်း မမိုးပဲ ခေါ်လိုက်တယ်။မမိုးက ကျုပ်ထက် ၃နှစ်ကြီးတယ် ၃၈နှစ်ဗျ အသားညိုညိုနဲ့ ခါးသေးရင်ချီ ကိုယ်လုံးပေါ့။ယောင်္ကျားရှိတယ် ယောင်္ကျားက ရောဂါသည်ပုံစံဗျ ပိန်ကပ်ကပ် ဖြူရော်ရော်နဲ့ပါ။ရောက်ကာစ တိုက်ခန်းရှေ့ သူ့အဝတ်တွေ လှမ်းတော့ ပလပ်စတစ်ကောက်တဲ့ ကလေးတွေလက်ချက်ထင်တယ် အဝတ်စားတွေ ပျောက်ပျောက်ကုန်တာ အဝတ်စားတွေက ဈေးကြီးတယ် အကောင်းတွေတဲ့ ကျုပ်မိန်းမ ပြောလို့ သိတာ။မမိုးက တခြားရပ်ကွက်တွေမှာ နေ့ပြန်တိုး ပေးစားတာတဲ့။ဟုတ်မှာ ညနေ ကျုပ် ဆိုင်ကပြန်ရင် ဆိုင်ကယ်နဲ့ ထွက်သွားတာ ည၈နာရီ ခွဲလောက်မှ အိမ်ပြန်လာတာဗျ။ ဒါနဲ့ပဲ မိန်းမက မမိုးကို အိမ်ရှေ့မြေအလွတ်မှာ အဝတ်လာလှမ်းဖို့ ပြောလိုက်တာပေါ့။
မမိုးက ရင်လျားနဲ့ အဝတ်လာလာလှမ်းတော့ ကျုပ်တံမျက်စည်း လှဲတဲ့အချိန်နဲ့ဆုံရင် ရေစိုပြီးကပ်နေတဲ့ မမိုး ကိုယ်လုံးအလှကို မြင်မိတာပဲ။ရေစိုနေတဲ့ ထမိန်အောက် တင်းထုတ်နေတဲ့ နို့အုံထိပ်က နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ခါးသေးကျဉ်လေးအောက်က ကော့ထွက်နေတဲ့ ဖင်သားစိုင်ကြီးတွေ ခဏတိုင်း တွေ့နေမိတယ်။ကြာတော့ ကျုပ်လည်း လိုးချင်လာတာပေါ့။ဒီလိုပြောလို့ ကျုပ်မိန်းမက မပေးဘူး မထင်နဲ့။ညပိုင်း စားသောက် တီဗွီကြည့်ပြီး အိပ်ယာဝင်တာနဲ့ ပုဆိုးလှန်ပြီး စုပ်ပေးတော့တာ။ ကျုပ်က ခိုင်းစရာကို မလိုတာ သူထန်နေရင်လည်း ထမိန်ချွတ်ပြီး ပက်လက်မှေးနေတဲ့ ကျုပ်ပါးစပ်ကို စောက်ပတ်နဲ့ပွတ်တော့တာပဲ။ပြီးတာနဲ့ အားရပါးရ လိုးကြတာဗျို့။တခါတခါ ဖုန်းဖွင့် အပြာကားကြည့်ရင်း အဲဒီကားတွေထဲက အတိုင်း အပြိုင်လိုက်လိုးပစ်တယ်။မိန်းမပစ္စည်းတွေကလည်း မမိုးထက်မလျော့ဘူးဗျ။အရပ်ကလေးပဲ နဲနဲပုတာ။ကျုပ်ထက် ပုတာပြောတာပါ သူအရပ်နဲ့ သူပစ္စည်းတွေက ကြည့်ကောင်းတုန်းပဲ။ဒီကြားထဲကကို ကျုပ်က မမိုးကို လိုးချင်မိတာ။
မမိုး အကြည့်တွေကလည်း ကျုပ်အပေါ် မရိုးဘူးဗျ။တခါတခါ သူ့ယောင်္ကျား ဆေးခန်းပို့ရင် သူ့ယောင်္ကျားကို တက္ကစီပေါ် ကျုပ်နဲ့မမိုးက တွဲတင်ပေးရတယ်။အဲဒီချိန်ဆို မမိုးဖင်တွေ ကျုပ်လီးနဲ့ပွတ်မိတဲ့အခါလဲပွတ်မိ သူယောင်္ကျားထိန်းရင်း ကျုပ်ပေါင်ကြားထဲ မမိုးပေါင်တန်ကြီးတွေ ခဏခဏ ရောက်လာတတ်တာပေါ့။ မကြာပါဘူး ကျုပ်နဲ့မမိုးနဲ့ လိုးဖြစ်ကြတယ်။ကျုပ်ကလည်းလိုးချင် မမိုးကလည်း သူ့ယောင်္ကျားက လူမမာဆိုတော့ ဆာနေတာပေါ့။တရက်ကျ မိုးကလည်းရွာ နေ့ခင်းဘက် မမိုးက အိမ်ရှေ့ကနေ ကျုပ်မိန်းမ နာမည်အော်ရင်း လက်ဖက်သုပ်စားဖို့လာပိုတာဗျ။မိန်းမက မနက်တည်းက သူ့ဦးလေးအိမ် သွားတာ ညပိုင်းမှ ပြန်ရောက်တော့မှာ။တခါတခါ သူအလုပ်အားရက်လေး သွားတာဆိုတော့ ကျုပ်လည်း ဘာမှ မပြောပါဘူး။မမိုးဝင်လာတော့ ကျုပ်က အိပ်ခန်းတံခါးဟထားပြီး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တာပေါ့။မိုးအေးအေးနဲ့ ဖုန်းဖွင့်ပြီး အပြာကားကြည့်နေတော့ လီးကထောင် နေရောပဲ။ ခဏနေတော့ တံခါးဖွင့်သံနဲ့အတူ မမိုးက ကျုပ်တို့ လင်မယားခန်းထဲ ဝင်လာတာပေါ့။
အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းနဲ့ အခန်းလွတ် တခန်းကျော်က ကျုပ်တို့အိပ်ခန်းပါ။ခါတိုင်း မမိုးက ကျုပ်မိန်းမနဲ့ အခန်းထဲထိ စကားဝင်ပြောနေကြဆိုတော့ ခပ်ရဲရဲပဲ ဝင်လာတာဗျ။ကုတင်နားရောက်တော့ မမိုးခြေသံက ရပ်သွားတာပဲ။ကျုပ်လည်း မျက်လုံးလေး အသာဖွင့်ကြည့်တော့ ထင်တဲ့အတိုင်း ကျုပ်ပုဆိုးထဲက ထောင်ထွက်နေတဲ့ လီးကို စိုက်ကြည့်နေတာ။ကျုပ်မျက်နာကြည့်လိုက် ကျုပ်လီးကြည့်လိုက်ပေါ့။ကျုပ်လည်း မမိုး ကျုပ်မျက်နာကြည့်တာနဲ့ မျက်လုံးမိတ်ပစ်တာ ပြီးမှ အခြေနေပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာပဲ။ ခဏနေတော့ မမိုးက ကုတင်ဘေး တင်ပလွဲဝင်ထိုင်ရင်း ပုဆိုးအပြင်ကနေပဲ ကျုပ်လီးကို ဆုပ်ကိုင်နေတယ်။ကျုပ်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်း ပုဆိုးခါးပုံစကို ဖြည်ချပစ်ပြီး ပုဆိုးကို ပေါင်လယ်ထိဆွဲချ လီးကို ပြန်ကိုင်ကြည့်နေတာဗျ။လီးအရည်ပြားကိုဖြဲလိုက် စုလိုက်နဲ့ ကျုပ်လည်း မနေနိုင်တော့ပါဘူး။
ချက်ချင်းကုန်းထပြီး ကျုပ်လီးကိုင်နေတဲ့ မမိုးကို ကုတင်ပေါ်ဆွဲလှဲပစ်တာ။ကြောင်ကြည့်နေတဲ့ သူ့ထမိန်ကို လှန်ပြီး ကုတင်ပေါ် ပက်လက်အနေထား အိပ်ခိုင်းရင်းအပေါ်က ခွလိုးလိုက်တယ်ဗျာ။အစတော့ မူတာပေါ့ နောက်ပိုင်းလီးဝင်တာနဲ့ ငြိမ်ကျသွားတယ်။တဖြည်းဖြည်း ပြန်ပြီး အောက်ကနေပင့်ပေးနေတာပါပဲ။ တချီပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား ပက်လက်မှေးရင်း စကားပြောဖြစ်ကြတယ်။ဒီကိစ္စ ကျုပ်မိန်းမ သက်ထား မသိပါစေနဲ့ပေါ့။ကျုပ်က နောက်ကျ အခွင့်ရေးပေးရင်း ခံမှာလားမေးတော့ ခေါင်းညိတ်ပြရှာတယ်။အတော်လေးကြာတော့ ကျုပ်က သူ့ထမိန်ချွတ်ပစ်တာ မျက်နှာလေးရဲတွက်နေတာဗျို့။ထမိန်ကျွတ်သွားတာနဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်လေး လက်နဲ့အုပ်ပြီး ပက်လက်အနေထားနဲ့ မျက်နှာလွဲနေတာဗျ။ကျုပ်လည်း ပုဆိုးချွတ်ပြီး မမိုးပေါင်သားလေးတွေ လက်နဲ့ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တယ်။စောက်ဖုတ်ကို လက်နဲ့အုပ်ထားပေမယ့် ပေါင်တွေတော့ မသိမသာ ဖြဲပေးနေတာပါ။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်း အဖုတ်ကိုအုပ်ထားတဲ့ လက်တွေဖယ်ရင်း သူ့ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး ကုန်းယက်ပစ်တော့တာ။
မျက်လုံးလေးမိတ်ပြီး တအီးအီးနဲ့ ညည်းနေတာဗျို့။ပေါင်တန်လေးတွေလည်း တဇပ်ဇပ်တုန်နေတာ။ကျုပ်ရပ်လိုက်ရင်တော့ ခါးလေးကော့ပြီး သူ့စောက်ပတ်နဲ့ ကျုပ်ပါးစပ်ကို တေ့ပေးပြန်ရောပဲ။ကျုပ်လည်း အဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းထဲ အထက်အောက်ယက်ပေးပြီး အစိလေးကို မနာတနာလေး ကိုက်ပေးလိုက်တယ်။အဲလို အစိလေးကိုက်ပေးလိုက်ရင် ပေါင်တန်တွေမြှောက်ပြီး ဖြဲရင်း ကျုပ်မျက်နှာကို သူ့စောက်ဖုတ်နဲ့ ဆွဲကပ်ပစ်တာ။ ကြာကြာတော့ မခံနိုင်ရှာပါဘူး လိုးပေးဖို့ ခပ်တိုးတိုးလေး လှမ်းပြောနေတယ်။ ” အ …… ရှီးးးးးးးးးးးး …… လိုးရင်လိုးတော့ … ကိုမင်း ရယ် ” မမိုးစကားဆုံးတာနဲ့ ကျုပ်လည်း ပထမတခါလိုပဲ အပေါ်က ဖိလိုးပစ်တာ။အချက်ရေ ၅ဝလောက်ကျ မူတ်ပေးထားတဲ့ အရှိန်နဲ့မို့ မမိုး ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ပြီးသွားတာပါ။ကျုပ်မပြီးသေးမှန်း သိလို့ ကျုပ်ခါးကို သူ့ခြေနှစ်ဖက်နဲ့ ချိတ်ဆွဲပြီး ထပ်လိုးဖို့ ပြောနေသေးတယ်။
” မမိုး … လေးဖက် ကုန်းပေး ပါ့လား ” ကျုပ်စကားဆုံးတော့ ချက်ချင်းပဲ ကုန်ပေးပါတာဗျ။ကျုပ်လည်း နောက်ကနေ မမိုးဖင်ကြီး ငုံ့ကြည့်ရင်း ဆောင့်ဆောင့်လိုးတော့တာပေါ့။အတော်လေးကြာမှ ကျုပ်လဲပြီးတယ်။၂ချီပြီးတော့ မမိုးက ထမိန်ပြန်ဝတ်ပြီး ပြန်မှေးနေတာ။ပြန်မယ်လို့ မပြောသေးတော့ ထပ်လိုးရဦးမယ် ဆိုတာ ကျုပ်အလိုလို သိနေတာပေါ့။ခနားနားပြီး မမိုးယူလာတဲ့ လက်ဖက်သုပ်နဲ့ ထမင်းစားလိုက်တယ်။မမိုးကတော့ ထမင်းမစားဘူး ဘေးကနေ လက်ဖက်သုပ်ပဲ ထိုင်စားနေတာ။ထမင်းစားပြီး မမိုးက ကော်ဖီဖျော်ပေးတော့ ကော်ဖီထုပ်နဲ့ နို့ဆီက အိမ်မှာ အဆင်သင့်ပါ ရေနွေးတည်ရုံပါပဲ။ကျုပ်လည်း ကော်ဖီလေးသောက်လိုက် ဆေးပေါ့လိပ်လေး ရှိုက်လိုက်နဲ့ ခဏနေတော့ အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာကြတယ်။ မမိုး ပြန်တော့မလား မေးတော့ ခေါင်းရမ်းပြနေတာ။သူ့ယောင်္ကျားကို ထမင်းကျွေးပြီးသားတဲ့ သူလည်းစားပြီးသားပြောတယ်။ကျုပ်လည်း ကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှဲရင်း ဆေးလိပ်ဖွာနေတာပေါ့။မမိုးက ကျုပ်ခြေရင်းကနေ ပေါင်ကြားထဲကြည့်နေတာပဲ။
ခဏနေတော့ ပုဆိုးထဲခေါင်းတိုးပြီး ကျုပ်လီးကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်တော့တာ။ပုဆိုးလှန်ကြည့်တော့ ကျုပ်ပေါင်တွေကို ဆွဲဆိတ်တော့တာဗျ။သူရှက်လို့ မကြည့်နဲ့တဲ့။လီးထိပ်ကို ကလေးနို့စို့သလို စုပ်ပေးနေတာပါ။ပါးစပ်ညှောင်းရင် လက်က ဂွင်းထုပေးသေးတယ်။ ကျုပ်လီးတစ်ချောင်းလုံး မာထင်လာမှ အပေါ်ကနေ ခွလိုးနေတာ။ထမိန်ချွတ်ခိုင်းတော့ ရှက်နေသေးတယ်ဗျ။ခုနတောင် ချွတ်ပြီးသားပြောတော့ အဲချိန် သူ စိတ်အရမ်းထနေလို့တဲ့။ထမိန်ချွတ်ပေးပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျုပ်ပေါ်မှောက်ချပြီး သူ့စိတ်ကြိုက် ဆောင့်လိုးလိုက် ဝိုက်လိုးလိုက်နဲ့ ပြီးကာနီးကျ ကျုပ်နူတ်ခမ်းကို ခပ်တင်းတင်း ဆွဲစုပ်ပြီး စောက်ရည်တွေပန်းထုတ်ပစ်တာ။ကျုပ်လည်း အောက်ကနေ ကြိတ်လိုးလေး လိုးရင်းပြီးလိုက်ရတာပေါ့။နောက်ရက်ကစပြီး မမိုးက ကျုပ်ရှိတဲ့ချိန် အိမ်ဘက်လာပါတယ် ၂ခါလောက်ပဲ လိုးလိုက်ရတယ်။
ကျန်ရက်တွေက ကျုပ်မိန်းမ သက်ထားရှိတော့ ဘာမှလုပ်မရဘူးဗျို့။ ၁လလောက်နေတော့ ညပိုင်း သက်ထားက နက်ဖန် အလုပ်ပါးတုန်း သူ့ဦးလေးအိမ် သွားမယ်ပြောတာ ကျုပ်လည်း ဝမ်းသာမိတာပေါ့။မနက်ဖန် မမိုးကို ခေါ်လိုးရုံပဲ။နောက်ရက် မနက်ကျ ကျုပ်လည်း အလုပ်ကို စောစောထွက်ရင်း မိန်းမကို သူ့ဦးလေးအိမ်ဝင်ပို့ပြီးမှ ဆိုင်ဖက်ထွက်ခဲ့လိုက်တာ။မိန်းမဦးလေးအိမ်က သက်သက်ဗျ ဆိုင်နဲ့ ဝေးတယ်။ဆိုင်ရောက်တော့ မမိုးကို လိုးရမယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ လီးက တချိန်လုံးထောင်နေတော့တာဗျို့။၁၁ခွဲလောက်ထိ နယ်ပို့ရမယ့် ပစ္စည်းတွေ သေချာစစ် ထုတ်ပိုးပြီး စာရင်းစာအုပ်ထဲ အကုန်မှတ်ပေးလိုက်တယ်။ထမင်းချိုင့်ဖွင့်ပြီး ဆိုင်မှာပဲ ထမင်းစားလိုက်တာပေါ့။ ပြီးတာနဲ့ အိမ်ပြန်လာခဲ့လိုက်တာ ၂နာရီမှ ဆိုင်ပြန်လာမယ့်အကြောင်း ကလေးတွေ မှာထားခဲ့ပြီ။ခါတိုင်းထမင်းစားပြီးရင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားထိုင်ပြီး ၁ချက်ခွဲလောက်မှ ဆိုင်ပြန်လာတာပါ။
ဒီနေ့တော့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ အိမ်ပြန်လာရင်း တလမ်းလုံးတွေးလာတာဗျ။ဒီတခါ မမိုးကို တုံးလုံးချွတ်ခိုင်းပြီး လိုးတော့မှာ မမိုးကလည်း နောက်ဆုံးခေါက်လိုးတုန်းက တုံးလုံးချွတ်ခံဖို့ ကတိပေးပြီးပြီ။ရပ်ကွက်နားမရောက်ခင် ဆိုင်ကယ် ဘီးပေါက်တာနဲ့ လေထိုးကျွတ်ဖာဆိုင် ဆိုင်ကယ်အပ်ထားရင်း အရပ်ထဲ ခြေချင်လျှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အိမ်ရောက်တော့ အိမ်းဝင်း တံခါးက စိထားတာဗျ။ မနက်က သော့ခတ်ထားခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ အိမ်ဝင်း တံခါးအသာဖွင့်ပြီး ဝင်တော့ အိမ်တံခါးကလည်း စိရုံလေး စိထားတာ။တခုခုတော့ မှားနေပြီဗျ။သူခိုးဝင်ပြီထင်တယ် မမိုးကို ခေါ်လိုးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ တောင်နေတဲ့လီးက ပျော့ကျသွားတယ်ဗျာ။အိမ်ရှေ့ပြန်ထွက် တုတ်တစ်ချောင်းယူရင်း အိမ်ထဲခြေဖွဖွနင်းပြီး ပြန်ဝင်လာတာပေါ့။
ဧည့်ခန်းထဲလည်း လူမရှိဘူး။နောက်ဖေးလျှောက်လာတော့မှ စကားသံ တိုးတိုးလေး ကြားမိတာဗျ။အသံကြားတဲဆီ တိုးကပ်သွားတော့ ကျုပ်တို့လင်မယားခန်းထဲကပါ။ ” ခ်ခ် ခ်ခ် … ဒါပဲ … သူဟာကြီးက … အတုတ်ကြီး ” ကျုပ်မျက်လုံးပြူးသွားမိတယ်ဗျာ ဒါက ကျုပ်မိန်းမ သက်ထား အသံဗျ။မနက်က ကျုပ်ကိုယ်တိုင် သူ့ဦးလေးအိမ် လိုက်ပို့ထားတာ။ ” အဲဒါမို့ … သက်ထားလေးကို … ဦးထွန်းက ဖုန်းဆက်ခေါ်ရတာပေါ့ ” သက်ထားစကားအဆုံး ချက်ချင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ ယောင်္ကျားသံကြောင့် ကျုပ်လည်း ဒုတိယအကြိမ် အံအောရင်း သိချင်စိတ် တားမရတော့ပါဘူး။ဟနေတဲ့ အိပ်ခန်းတံခါးပေါက်ကနေ အတွင်းဘက် ချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။ကျုပ်မိန်းမသက်ထားက ကုတင်ပေါ်မှာ တုံးလုံးလေးဗျ ဘေးတစ်စောင်းလှဲလျက်လေး ဦးထွန်းက အပေါ်ကစွပ်ကျယ်အဖြူနဲ့ အောက်ကပုဆိုးမပါတော့ဘူး ပုဆိုးက ကုတင်အောက်ကြမ်းပင်မှာ ပုံလျက်လေးပဲ။ဦးထွန်းဆိုတာ အရပ်ထဲက ဆိုင်ကယ်တက္ကစီသမားပါ အသက်က ၅ဝကျော်ပြီး လက်ပြင်ကိုင်းကိုင်း အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ ခေါင်းဖြူကြီးပေါ့။
ထူးခြားတာက ဦးထွန်းပေါင်ကြားက လီးဗျ အတုတ်ကြီးပဲ။အရှည်က ကျုပ်လောက်မရှိပေမယ့် အတုတ်က သိသာတယ်ဗျာ။မပျော့မမာ အနေထားတောင် ကျုပ်တောင်တဲ့ အနေထားလောက်ရှိနေတာဗျို့။သက်ထားခေါင်းရင်းနား ဘယ်ခြေထောက်ကွေးထိုင်ပြီး ညခြေက ကုတင်အောက် တွဲလောင်း ချထားတာပါ။သက်ထားက ဦးထွန်းဘယ်ဘက်ပေါင်ပေါ် ခေါင်းအုံးပြီး လက်တဖက်က ဦးထွန်းလီးကြီး ကိုင်စွရင်း စကားပြောနေတာဗျ။ခုချိန် တုတ်နဲ့ဝင်ရိုက်ရ ကောင်းမလား စဉ်းစားမိချိန် သူတို့စကားတွေကြောင့် ကျုပ် ရိုက်ချင်တဲ့စိတ်တွေ ပျောက်သွားခဲ့တာပါ။ ” ကိုမင်းက … အလုပ်ဆိုင်မှာလား ” ” အင်းလေ … ညနေမှ ပြန်လာမှာ ” ” အော် … သိသွားရင် သက်ထားတို့ စကားများမဆိုးလို့ပါ ” ” အင်းပါ … သူတောင် သစ္စာမရှိတာ … သက်ထားက ဘာလို့သစ္စာထားနေရဦးမလဲ ” ” အင်း … ခင်မိုးလွင်ကလည်း မထင်ရဘူးနော် … သက်ထားနဲ့ ဒီလောက်ခင်တာကို ” ” ဒါကတော့ … မမိုး စောက်ပတ်က … သက်ထားစောက်ပတ်ထက် … ကောင်းလို့နေမယ် ” ” မယုံပါဘူးကွယ် … သက်ထားလေး စောက်ပတ်က ဒီလောက် အိစက်နေတာကို ” ” အဲလိုတွေ … ညာညာ လိုးနေတာ … မသိခက်မယ် … ဟွန့် ” သွားပြီဗျို့ ကျုပ်မမိုးကို လိုးတာ မိန်းမက သိသွားတာဗျ။
ဘယ်လိုသိတာလဲ မသိဘူး ဦးထွန်းကရော ဘယ်ကသိတာလဲ မမိုးနဲ့ မကင်းတာလား။ကျုပ်လည်း စဉ်းစားရင်း အိပ်ခန်းထဲ ဆက်ကြည့်နေတယ်။ ” ညာတော့ မလိုးပါဘူးနော် … ဦးထွန်းက … ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ ဖေါက်သည်မို့ သိအောင်လာပြတာပါ … သက်ထားက ခံပြင်းစိတ် ဝင်ပြီး အလိုးခံတာလေ ခိခိ ” ” အံမယ် … သက်ထားစိတ်ဆိုးပြီး ငိုနေတုန်း … ဒီလီးကြီးက … မသိမသာနဲ့ လိုးသွားတာ ဟွန့် ” ဟမ် !! ဦးထွန်းက ဘာလာပြတာပါလိမ့် ကျုပ်တွေးမရဘူးဗျာ။ ” အင်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါ … သက်ထားရယ် … အဲဒီနေက … မြောက်ရပ်ကွက်က သက်ထားခေါ်ထားတာကို … ဟောဒီ သက်ထားလေးမှတ်ပြီး လာခဲ့တာပါ … ဒီရောက်တော့ လူမရှိလို့ လှည့်ပြန်မလို့ လုပ်တုန်း အခန်းထဲက ညည်းသံကြားတာနဲ့ ချောင်းကြည့်မိတာ … မထင်မှတ်ပဲ ကိုမင်းက … ခင်မိုးလွင် လေးဖက်ထောက်ပြီး လိုးနေတာလေ … ဒါနဲ့ ဦးထွန်းလည်း ဖုန်းနဲ့ ဗွီဒီယိုရိုက်ယူထားပြီး သက်ထားကိုပြမိတာပေါ့ ”
” အဲတုန်းက သက်ထား တကယ်ဝမ်းနည်းတာပါ ဒေါသလည်း ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မို့ ဦးထွန်းကို အလိုးခံပစ်လိုက်တာ … အဲဒီကျမှ နေလို့ထိုင်လို့ရသွားတာ … ပြီးတော့ ” ” ပြီးတော့ … ဘာဖြစ်လည်း ” ” ပြီးတော့ … ဟောဒီက လီးတုတ်ကြီး ကိုလည်း … စွဲသွားတာပေါ့ရှင် … ဒါ ကြားချင်နေတာမလား … ဟွန့် ဟွန့် ” အော်…ကျုပ်နဲ့မမိုးလိုးတဲ့ပုံကို ဗွီဒီယိုရိုက်ပြီး ဦးထွန်းက မိန်းမကို ပြလိုက်တာဗျ။မိန်းမကလည်း ကျုပ်ကို ရွဲ့ပြီး ဦးထွန်းကို အလိုးခံတာနေမယ်။ကျုပ်ထက် ပိုတုတ်တဲ့ဦးထွန်း လီးကို စွဲသွားတာနေမှာပါ။ခုလည်း ဟွန့်ဟွန့် ဆိုပြီး ဦးထွန်းလီးကို စုလိုက်ဖြဲလိုက်နဲ့ စိုက်ကြည့်နေတာပဲ။တဖြည်းဖြည်း ဦးထွန်းလီးကြီး ကျုပ်မိန်းမ လက်ထဲ မာလာပြီဗျ။ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ ကျုပ်လီးထက် အများကြီးတုတ်တယ် ထိပ်က ဒစ်ကြီးက ခရမ်းချဉ်သီးအမှဲ့လိုပဲ ရဲပြီး ကော့ထွက်နေတာ။
သက်ထားက ဖြဲထားတဲ့လီးကို ပြန်မစုတော့ပဲ ဒစ်ဖူးနောက်နားလေးကို လျှာနဲ့ယက်ပြီး ဆွဲစုပ်နေတာ။ပြီးမှ လျှာထိပ်လေးကို ထုတ်ပြနေတယ်။ ” ဆောရီးသက်ထားရယ် … ရေမဆေးခဲ့ရတာ ” ” ဟင့်အင် … ရတယ် ဦးထွန်းရဲ့ … သက်ထားကြိုက်တယ် ” ကျုပ်မိန်းမ သက်ထားက လျှာကို ပြန်လိပ်သွင်းပြီး တစုံတခု မျိုချပြီးမှ ပြန်ပြောနေတာပါ။ ” သက်ထားလေး ကြိုက်ရင် … နောက်ခါလဲ … ရေမဆေးပဲ ထားလိုက်မယ် … ဒါမှ လချီးဖတ်တွေ များလာမှာ ” ” အင်း … မဆေးနဲ့ … ၃ရက်တခါလောက် … သက်ထားလျှာနဲ့ လာဆေးလှည့်ပေါ့ ” ဦးထွန်းဒစ်နောက် လီးအရည်ပြားပေါ်က လချီးဖတ်တွေကို ကျုပ်မိန်းမက တအားကြိုက်တာဗျ။တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ပြောင်နေအောင် ယက်စုပ်ပြီး မျိုချနေတယ်။ကျုပ်ကတော့ လီးကို သန့်ရှင်းအောင်အမြဲဆေးထားပေးတာ။မိန်းမက မထင်မှတ်ပဲ လချီးကြိုက်တာ ခုမှ သိလိုက်ရတာဗျာ။ခဏနေတော့ ဦးထွန်းက ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်တာ သက်ထားက ဦးထွန်းမျက်နှာခွပြီး စောက်ပတ်နဲ့ တက်ပွတ်တော့တာပဲ။
” အ အားးး …… ဟုတ်တယ် …… ယက်ယက် … အစိလေးလဲ …… စုပ်ပေး … အမလေးးး ကောင်းလိုက်တာ ဦးထွန်းရယ် ” ကျုပ်အခြေနေကလည်း မိန်းမက သူစိမ်းအဖိုးကြီးကို တက်ပွတ်နေတာတောင် ပြောမရတဲ့ အခြေနေဗျို့။ကျုပ်နဲ့မမိုး လိုးတာ မိန်းမက သိသွားတော့ ပြောလဲ တစ်ယောက်တခွန်း စကားများရုံပဲလေ။ကြည့်နေတုန်းလေး သက်ထားက ဦးထွန်း မျက်နာပေါ်ခွထားရာကနေ ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှန်ပေးနေပြီ ကျုပ်မိန်းမ ပေါင်တန်နဲ့ ဖင်ကြီးတွေက လိုးချင်စရာပါပဲ။ဦးထွန်းလို အဖေအရွယ်တောင် မလွတ်တမ်း ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်။ ” ဦးထွန်း … ဖြည်းဖြည်းပဲ … လိုးနော် … အရှိန်ရမှ … စိတ်ကြိုက်လိုး ” ” အင်းပါ … သက်ထားလေးရယ် … သက်ထားလေးရပြီဆိုမှ … အားရပါးရ လိုးမှာပါ ” ကျုပ်မိန်းမသက်ထားက အလိုးသာခံချင်တာ ဦးထွန်းလီးကို ကြောက်နေတုန်းပဲ။လီးထိပ်ဝင်တာနဲ့ မျက်နာလေး ရှုံ့မဲ့နေတာဗျို့။ ” အမလေးးး … ကျွတ်ကျွတ် ” ” နာလို့လား ” ” အင်း ” ဦးထွန်းက လီးပြန်ထုတ်ပြီး ကျုပ်မိန်းမ စောက်ပတ်လေးကို ယက်ပေးပြန်တယ်။ခဏနေတော့မှ ပြန်လိုးနေတာ။
လီးတဝက်လောက် အထုတ်သွင်းလုပ်ရင်း မိန်းမနို့တွေ ကုန်းစို့ပေးနေတာဗျို့။မိန်းမလည်း နို့စို့ခံရင်း လီးအရသာခံနေတာပေ့ါ။ငြိမ်သွားတာနဲ့ ဦးထွန်းက လီးအရင်းထိ ဖိသွင်းတာနေမယ် မိန်းမ အော်သံလေး ခပ်စူးစူး ပြန်ထွက်လာပြန်ရော။ဒီတခါ ဦးထွန်းက မညှာဘူးဗျ ကျုပ်မိန်းမ ပါးစပ်ကို လက်နဲ့အုပ်ပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးပစ်တာ။ပါးစပ်ပိတ်ခံရတော့ မိန်းမအသံကလည်း ဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ့ပေါ့ ပက်လက်အနေထားလေးနဲ့ တွန့်လိမ်နေတာ အောက်ကနေ ဦးထွန်းလီးဆီက လွတ်အောင် ရုန်းနေသလိုပဲ။ ဦးထွန်းဆောင့်လိုးတိုင်း ကျုပ်တောင်တုန်တုန်နေရတာပါ။ထူးခြားတာက ကျုပ်ပေါင်ကြားက လီးဗျ ပထမဒေါသဖြစ်ရာကနေ ဒေါသနေရာ ကာမစိတ်က အစားထိုးနေရာယူပြီး ကိုယ့်မိန်းမ သူစိမ်းလိုးနေတာတောင် သာယာသလို ကျေနပ်သလို ခံစားနေမိတာပဲ။လက်နဲ့ ၅ချက်လောက်ပဲ ထုလိုက်ရတယ် လရည်တွေ တဖျောဖျောနဲ့ဗျာ ခါတိုင်း မိန်းမကို လိုးရတာထက်ကို အရသာရှိနေတာဗျို့။လရည်တွေကုန်မှ ကျုပ်လည်း ဂွင်းတိုက်ရာကနေ လီးကိုလွတ်ပြီး မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ။
မိန်းမက မအော်တော့ပါဘူး မအော်တဲ့အပြင် အောက်ကနေ ဖင်လေးပင့်ပေးပြီး ဦးထွန်းကို စိတ်ကြိုက်လိုးဖို့ ပြောနေပါပြီ။ ” အားးးး ရှီးးးးးးးး …… ရပြီ ဦးထွန်း … လိုးတော့ မညှာနဲ့ … သက်ထား ခံနိုင်ပါပြီ ” မိန်းမ စကားဆုံးတာနဲ့ ဦးထွန်းကလည်း မီးပွင့်မတတ်ဆောင့်လိုးတာဗျာ အသက်ရွယ်နဲ့ မလိုက်ဘူး ကုတင်တိုင်တွေ ရမ်းခါနေတာဗျ။ကျုပ်မိန်းမ သက်ထားကတော့ အောက်ကနေ လီးအရသာ ခံရင်း ဦးထွန်း လက်မောင်းတွေပွတ်ပြီး တဟင်းဟင်း ညည်းနေတာဗျို့။ဦးထွန်းက အသက်ကြီးသလောက် လိုးအားလည်း သန်တယ်ဗျ မိန်းမ ၂ချီပြီးမှ သူပြီးတာ။ဦးထွန်းလီး ဆွဲထုတ်တာနဲ့ မိန်းမက ကုန်းထပြီး လရည်တွေနဲ့သူ့စောက်ရည်တွေ ပေပွနေတဲ့ လီးကို ကုန်းစုပ်ပေးလိုက်သေးတယ်။ ဦးထွန်းလီးကြီး မူလအရွယ်စားပြန်ရောက်တဲ့အထိ ပြောင်စင်အောင် စုပ်ပြီးမှ ပါးစပ်ထဲက လီးကို ထုတ်ပေးလိုက်တာပါ။ဦးထွန်း ပုဆိုးပြန်ဝတ်တာနဲ့ ကျုပ်လည်း အသာလေး အိမ်ပြင်ပြန်ထွက်ခဲ့တယ်။ဆိုင်ကယ်ဘီးပေါက်လို့ အပ်ထားတဲ့ဆီ လမ်းလျှောက်လာရင်း ဆိုင်ကယ်ပြန်ရွေးပြီး အလုပ်ဆိုင်ပြန်သွားရတာပေါ့။ညနေပိုင်း ကျုပ်အိမ်ရောက်တော့ ကျုပ်မိန်းမသက်ထားက ရေချိုးပြီး သနပ်ခါး အဖွေးသားနဲ့ဗျ။နေ့ခင်းက ဦးထွန်းကို အလိုးခံတာ သူမဟုတ်သလိုပါပဲဗျာ…..ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ရငျထဲမှာတော့